Tababar Ku Saabsanaa Maaraynta Isticmaalka Raashinka La Dhigo - Cakaara News
Tababar Ku Saabsanaa Maaraynta Isticmaalka Raashinka La Dhigo
Jigjiga (Cakaaranews ) Jumce 20ka May 2016 Tababar uu soo agaasimay Waaxda Damaana-qaadaka Cuntada ee Xafiiska Horumarinta Beeraha iyo khayraadka dabiiciiga ah ee DDSI oo ku saabsanaa maaraynta Isticmaalka raashinka la dhigo ayaa ka qabsoomay guriga shirarka ee isla xafiiska horumarinta beeraha Iyo khayraadka dabiiciga ah.
Hadaba Agaasinka Waaxda Damaana-qaadka Cuntada mudane Lubi Axmed Kaariye oo ugu horayn ka Hadlay furitaankii tababarkan ayaa sheegay in tababarkan loo qabtay 60 xubnood oo ah shaqaalaha Maaraynta raashinka heer degmo ee barnaamijka badbaadada waxsoo saarka cuntada (PSNP) iyo xubnaha Maaraynta khataraha (Risk Management) iyo waliba 26 xubnood oo shaqalaaha heer deegaan ah.
Sidoo kale wuxuu agaasinku intaa ku daray in tababarku socon doono mudo 3 cisho ah isla Markaana ay lagama maarmaan tahay in kaqaybgalayaashu ay cashirka si fiican u qaataan mudada uu tababarku socdo ilaaliyaana wakhtiga la Qaadanayo cashirka. wuxuuna agaasinku la dardaarmay tababarayaasha isagoo sheegay in ay Fahan buuxa kasiiyaan kaqaybgalayaasha sidii loo maarayn lahaa isticmaalka raashinka la dhigo.
Ugudanbayna waxaa iyana dareenkooda ka hadlay qaar kamid ah kasoo qayb galayaasha tababarka oo Sheegay in tababarkani uu yahay mid aad muhiim u ah islamarkaana uu wax wayn ka badli doono aqoontii hore ay ula hayeen barnaamijka badbaadada iyo dabaana-qaadka waxsoo saarka cuntada.